कपिल र हिनासहित यी ६ कलाकारको पहिलो पारिश्रमिक कति ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
कपिल र हिनासहित यी ६ कलाकारको पहिलो पारिश्रमिक कति ?
५ भदौ, एजेन्सी । कमेडियन कपिल शर्माले हालसालै आफ्नो पहिलो पारिश्रमिकको बारेमा खुलासा गरेका छन् । उनले कपडा उद्योगमा काम गर्दा महिनाको १५ सय रुपैयाँ पाएको आफ्नो टेलिभिजन शो ‘द कपिल शर्मा शो’मा बताएका हुन् ।
Previousनयाँबसपार्कमा महिला र पुरुष मृतअवस्थामा देख्ने प्रत्यक्षदर्शीको यस्तो भनाइ
Nextझापामा दुईजनाको मृत्यु